Maxeey Tahay Sababta Uu Cumar C/rashiid U Baneynayo Xubinimada Aqalka Sare – XAMAR POST
Maxeey Tahay Sababta Uu Cumar C/rashiid U Baneynayo Xubinimada Aqalka Sare
By Mohamed Ahmed On Jul 9, 2017
Raiisul Wasaarihii Hore ee Xukuumadda Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo ka mid ahaa Xubnaha Aqalka Sare ee Somalia, isla markaana laga soo doortay Puntland ayaa u gudbiyay Aqalka Sare Dalab uu ku doonayo inuu ku Wareejiyo Qof kale Xubinimadiisa Aqalka Sare.
Xog ay heshay Xamarpost ayaa sheegaysa in Cumar C/rashiid uu Qoraalkiisa u diray Guddoonka Aqalka Sare, isagoo doonaya inuu Xubinimadiisa Aqalka Sare ku wareejiyo Qof uu isagu wato. Waxayna Guddoonka Baarlamaanka ka arrinsanayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen Codsigan oo haddii ay aqbalaan ay dhici karto in Wadada uu u xaaro sidii Baarlamaanka 9-aad in la isku baneeyo Kuraasta Xildhibaanimo.
Cumar ayaa loo sababaynayaa inuu uga tanaasulanayo Xubinimadda Aqalka Sare isaga oo aan ka qayb galli karin Fadhiyadda Aqalka Sare, sababo la xiriira Cabsi Amni. Waxayna Xamarpost ogaatay in Cumar C/rashiid la soo gaarsiiyay Digniino Qataro soo wajihi karo haddii uu tago Muqdisho.
Cumar C/rashiid waxa uu Mudooyinkan gacan saar la lahaa Imaaraadka iyo Sucuudiga oo xiriirkoodu ay la leeyihiin Somalia uusan hadda Wanaagsanayn. Waana Dulaalka ugu wayn ee isku xira Shirkadda DP ee Imaaraadka iyo Maamuladda Goboladda si ay ula wareegaan Dekadaha Somalia.
Cumar C/rashiid waxa uu 2 mar ka noqday Raiisul Wasaare Somalia, isagoo sidoo kale ka mid ahaa Musharixiintii Madaxwaynanimadda Somalia. Waxaana dhalay Madaxwaynihii 2-aad ee Somalia, Allaha u Naxariistee, C/rashiid Cali Sharmaake oo isagoo aan waqtigiisa dhamaysan lagu dilay Laascaanood, ka hor intii aysan Milatarigu Xukunka Dalka Afgambi kula wareegin.
kalfadhiga 2aad ee Baarlamaanka 10aad oo Maantay furay Madaxweyne Farmaajo